भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा १४० बेडको कोभिड वार्ड शुरु - Samatal Online
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा १४० बेडको कोभिड वार्ड शुरु
चितवन। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले सघन उपचार कक्षसहित १४० बेडको कोभिड वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । चितवनमा सङ्क्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालले कोभिड वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
क्यान्सरका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र २० बेडको कोभिड वार्ड सञ्चालन गर्दै आएको अस्पतालले अन्य सङ्क्रमितका लागि पनि उपचार गर्ने गरी बेड थप गरेको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमका अनुसार अस्पतालका चारवटा विभागमा रहेका बिरामीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर शनिबारदेखि कोभिड वार्ड सञ्चालन गरिएको छ ।
वार्डमा अहिले २४ संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । कोभिड वार्डमा दुई भेन्टिलेटर आठ मनिटरसहितको सघन उपचार कक्ष सरहको सुविधा रहेको डा. गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार भेन्टिलेटर र सघन उपचार कक्षको संख्या बढाउँदै लगिनेछ । कोभिड वार्डमा अक्सिजनको पाइपलाइन रहेका छन् । अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट भएकाले ठूलो समस्या नपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘वार्डलाई सकेसम्म सुविधा सम्पन्न बनाइने छ,’ उनले भने । जिल्लामा संक्रमित बढ्दै गएपछि क्यान्सर अस्पतालले कोभिडको उपचार सुरु गरेको हो । चितवनमा जिल्लाका भन्दा धेरै बिरामी बाहिरबाट आएका छन् । ४५० बेडको क्यान्सर अस्पतालमा हाल १७० जना क्यान्सरका बिरामी उपचाररत छन् । कोभिड वार्ड सञ्चालनमा आए पनि क्यान्सरका बिरामीको उपचार भने नरोकिने उनको भनाइ छ ।